My Nintendo Na-amalite na Japan Iji Lelee vidiyo, Zụrụ Egwuregwu Na More | Gam akporosis
Ihe ọhụrụ My Nintendo ngwa malitere na Japan: zụta egwuregwu, iyi egwu na oge egwuregwu gị
Nintendo amalitela ngwa ngwa My Nintendo ọhụrụ nke na-enye ụdị dị iche iche dị iche iche na ndị na-akwado ụlọ ọrụ a ma ama na ụlọ ọrụ ama ama ga-ahụ n'anya.
Ọ na-tumadi iji na ndị niile nwere otu n'ime ha consoles. Anyị na-ekwu maka ndị niile nwere Nintendo Gbanye, 3DS ma ọ bụ Wii U. Ngwa kachasị mma iji nwee ike ịzụta egwuregwu, lelee nkwanye nke ndị egwuregwu ndị ọzọ yana ọbụlagodi oge ị ga-egwu na egwuregwu vidio kachasị amasị gị.
N'oge ahụ naanị dị na Japan maka ndị ọrụ gam akporo na iOS. A na-eji Nintendo m enwe ozi niile na nso nso a banyere ọrụ egwuregwu kachasị amasị anyị, ngwaahịa ndị ahụ n'onwe ha, lelee vidiyo dị ka otu ngosi Nintendo na ikike ịzụta ngwanrọ maka Nintendo Switch. N'aka ozo, maka onye obula nwere Switch, o gha abu ihe achicha kachasi nma itinye na ekwenti ya.
O nwekwara taabụ iji mara oge ị na-eji egwuregwu kachasị amasị gị site na mkpanaka gị, na-eme ka ọ nwee ahụmịhe ibi mgbe ị nwere otu n'ime njikwa ndị ahụ. Nintendo hụkwara nke ahụ site na nyocha QR code nwere otu ngwa ị nwere ike ịlele-na na ndụ ihe ma ọ bụ mgbe ị na-ahapụ Nintendo ụlọ ahịa na Tokyo; ọ bụ ezie na nke a maka oge dị n'ihu site na ohere anyị nwere karị ugbu a na mkpochi.
Ugbu a Amaghi mgbe My Nintendo ga abata n’akuku ndiaỌzọkwa, ọ gaghị abụ ihe ijuanya ma ọ bụrụ na anyị were ogologo oge iji nweta aka anyị, ebe ọ bụ na na Japan ụlọ ọrụ ahụ na-adịkarị "oke oke" ma a bịa n'ịkwalite ọrụ na ngwa. Ọhaneze ndị Japan hụrụ ụdị "ihe" ndị a n'anya, ọ ga-emeghekwara ha oge niile karịa ka anyị bụ. Mgbe i nwere ike sere ọhụrụ Facebook Gaminggba Cha Cha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Ihe ọhụrụ My Nintendo ngwa malitere na Japan: zụta egwuregwu, iyi egwu na oge egwuregwu gị
A mara ọkwa Nubia Play 5G: Ọkara ntanetị ọhụụ na ihuenyo 144 Hz
Google Duo na-agbakwunye atụmatụ ọhụrụ ma melite ndị dị adị